माधवकुमार नेपाल समूहकाे नि’ष्कर्ष:प्रचण्डले नराम्रोसँग धो’का दिए ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
माधवकुमार नेपाल समूहकाे नि’ष्कर्ष:प्रचण्डले नराम्रोसँग धो’का दिए !
काठमाडौं, २२ वैशाख । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धोका दिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद ती’व्र बन्दै गएका बेला शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा का’र्यकारी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ‘चोचोमोचो’ मिलाएर धोका दिएको निष्कर्ष नेपाल समूहले नि’कालेको हो।
नेपाल समूह पार्टीभित्र दाहालको भूमिकालाई लिएर थप सशं’कित बनेको छ। बैठकअघि दाहालले पार्टीभित्रको संघर्षमा नेपाल समूहलाई साथ दिने बताएका थिए।
दुई अध्यक्षले चोचोमोचो मिलाएर वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन पहल गर्ने प्रस्ता’व बैठकमा पेस गरी अन्य विषयलाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाल समूह अ’सन्तुष्ट बनेको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
Previous के अहिलेको स’मस्या र समाधान केबल बामदेब मोह र ब्यबस्थापन मात्रै हो त ? ✍️ एक नारायण पौडेल
Next जनताको दु:ख बुझ्ने सांसद होस् त सुदन कि’राँती जस्तो होस् !